एमालेमा ओलीका हनुमान र दासहरू मात्रै छन्, चितवनमा कुम्भमेला चल्दैछ : झलनाथ खनाल [अन्तर्वार्ता]
नेपाल लाइभ बिहीबार, मंसिर ९, २०७८, १७:१८
नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन भोलि, मंसिर १० गतेदेखि १२ गतेसम्म चितवनमा हुँदैछ। शुक्ररबार हुने महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा देश तथा विदेशका भाइचारा पार्टीका प्रतिनिधिलाई एमालेले बोलाएको छ। तर, एमालेबाट भर्खरै छुट्टिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई महाधिवेशनमा निमन्त्रणा गरिएको छैन। एमालेले एकीकृत समाजवादीलाई ‘अवैध पार्टी’ भन्दै आएको छ।
एमालेको इतिहासमा पहिलोपटक माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालबिनाको महाधिवेशन हुँदैछ। एमालेको महाधिवेशनलाई एमालेबाटै छुट्टिएर बनेको एकीकृत समाजवादीले चाहिँ कसरी हेरिरहेको छ? यही सेरोफेरोमा रहेर एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग नेपाल लाइभका लागि वीरेन्द्र ओलीले गरेको कुराकानी :
तपाईंहरूले लामो समय पसिना बगाएको पार्टी एमालेको दशौं महाधिवेशन चितवनमा हुँदैछ। सबै पार्टीलाई बोलाइयो तर, तपाईंहरुलाई नै बोलाइएन नि?
हामीलाई एमालेको निम्तोको आवश्यकता छैन। अनावश्यक रुपमा निम्तोमा जाँदा खर्च मात्रै हुन्छ। त्यस्तो खालको कुम्भ मेलामा हामीलाई नबोलाएकोमा खुशी छौं।
अब त्यहाँ उनीहरुको कुम्भ मेला होला। नदीका किनारमा रमाइलो गर्छन्। सबै पलेटी कसेर भोज भतेर खान्छन्। त्यहाँ केपी ओलीका पुराणहरु चल्लान्। त्यही पुराण सुनेर फेरि आ–आफ्ना घर लाग्छन्।
उनीहरुले विधान महाधिवेशनमा बहसलाई खुला गर्न सकेनन्। विचारमा बहस गरेनन्। पार्टीमा लोकतन्त्र नै छैन। केपी ओलीको गुटका हनुमान र दासहरु मात्रै छन्। यसअघि एमालेका महाधिवेशनले राष्ट्रव्यापी रुपमा तरंग पैदा गर्थ्यो। अहिले केही पनि छैन। त्यहाँ सामसुम छ।
एमालेका यसअघिका महाधिवेशनमा निरन्तर सहभागी हुनुहुन्थ्यो। यसपटक निम्तो नै नगर्दा नमीठो लागेको छैन?
एमालेको पाँचौ, छैठौं, सातौं, आठौं र नवौं महाधिवेशन हाम्रै पहलकदमीमा भएको महाधिवेशन हो। ती महाधिवेशनप्रति हामी गौरव महसुस गर्छौं। नवौं महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्वमा दक्षिणपन्थ, अवसरवाद, गुटवाद र विर्सजनवाद हाबी हुन पुग्यो।
अहिले दशौं महाधिवेशन ओली गुटले गरिरहेको छ। यो दक्षिणपन्थी अवसरवाद र पुँजीवादलाई संस्थागत गर्ने कुम्भ मेला मात्रै हो। यसले देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कुनै योगदान गर्नेवाला छैन। जसरी लोपोन्मुख जनावरले उनीहरुको झण्डा समाइरहेको छ, त्यसैगरी यो दक्षिणपन्थी गुट नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा केही समयपछि लोप हुँदैछ। त्यो लोप हुने झण्डामा देखाएको जनावरले संकेत देखाइसकेको छ।
एमाले बनाउन तपाईं, माधवकुमार नेपाल लगायत नेताहरू अहोरात्र खट्नुभयो। जनतामाझ लोकप्रिय बनाउनुभयो। अहिले त्यही एमालेभन्दा अलग हुँदा कस्तो महसुस भइरहेको छ? गल्ती पो गरिएछ कि भन्ने लाग्दैन?
अहिले हामीले जुन कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, लक्ष्य र कार्यशैली निर्माण गरेर पार्टी पुनर्गठन गरेका छौं, हामी कम्युनिस्ट विचार, सिद्धान्तमा प्रतिवद्ध छौं। तर, एमालेको एउटा नेतृत्वदायी गुटले यो कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त छोडेर दक्षिणपन्थी पुँजीवादी कार्यदिशा र नीति सिद्धान्त लिएर हिँडिरहेको छ। हामी क्रान्तिकारी कार्यदिशा लिएर अगाडि बढिरहेका छौं। यसले संगठनात्मक स्वरुपमा केही फरक परेको होला। तर, वैचारिक राजनीतिक यात्रामा केही फरक परेको छैन।
तपाईंहरू जस्ता एमाले निर्माणमा लागेका नेताहरू बाहिर हुँदा अबको एमाले कस्तो बन्ला?
अहिले चितवनमा भइरहेको भेला भनेको दक्षिणपन्थी र पुँजीवादीपन्थी नेतृत्वदायी गुटको वरिपरि भएको भेला हो। भ्रममा परेका थुप्रै नेता-कार्यकर्ताहरु त्यहाँ छन्। उनीहरुको दिमाग विस्तारै प्रष्ट हुँदै जान्छ। त्यो नेतृत्वदायी गुट दक्षिणपन्थी, पुँजीवादपन्थी र विर्सजनवादी गुटमा रुपान्तरण भइसकेको कुरा उनीहरुका आफ्नै गुटका नेताहरुले दनादन बोलिरहेका छन्।
भन्नुको अर्थ एमालेसँग सहकार्य वा एकता हुने सम्भावना निकै टाढा पुगिसक्यो?
अहिले एमाले गुट राष्ट्रिय राजनीतिबाट, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट अलगथलग हुँदै गइरहेको छ। झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार ढल्न पुग्यो। सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेशका सरकार गए। अब राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभामा अझ ठूलो पहिरो जाँदै छ। राष्ट्रव्यापी रुपमा एकपछि अर्को पहिरो गएको, गइरहेको छ। पुनर्गठित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी एउटा राष्ट्रव्यापी पार्टीको रुपमा विस्तार गरेर अघि बढिरहेको छ। एमालेमा भ्रमबस बसेका कार्यकर्ताहरु एकपछि अर्को गर्दै हाम्रो पार्टीमा संगठित हुँदै गइरहेका छन्। अब एमालेमा गुटले नेतृत्व गरेको समूह छ। त्यो विस्तारै पानीको फोकाजस्तै विलाउनु अनिर्वाय छ।
आगामी चुनावपछि एमालेको भविष्य नै देख्दिनँ। देशैभरबाट एमाले शून्य हुन्छ। राष्ट्रव्यापी रुपमा पराजित हुन्छ। पराजयका आधारहरु आफैं तयार गरेको छ। त्यसको वैचारिक, सांगठनिक आधार आफैं तयार गरेको हो। एमाले जनताबाट अलग हुँदै गइरहेको छ। जसलाई जनताले दुई तिहाइ बहुमत दिए, त्यसले देशलाई खरानी पार्‍यो। त्यस्तो पार्टीलाई कसले बहुमत दिन्छ? कसले भोट दिन्छ? नेपाली जनता त्यति मुर्ख छैनन्। नेपाली जनताको राजनीतिक चेतना निकै माथि उठिसकेको छ। नेपाली जनता धेरै संगठित र सचेत भइसकेका छन्। अब जनता चनाखो भएर अघि बढ्दै छन्।